The Ab Presents Nepal » कक्षा १२ को नतिजामा यस्तो चरम लापरबाही! विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा
कक्षा १२ को नतिजामा यस्तो चरम लापरबाही! विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा
काठमाडौ -: राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत वैशाखमा सञ्चालन गरेको कक्षा १२ को नतिजामा चरम लापरबाही गरेको खुल्न आएको छ । यसअघिपनि यस्तै लापरबाहीका खबर हामीले प्रकाशन गरिसकेका छौ । अहिले अर्को लापरबाहीको हद पार गरेको मार्कसिट फेला परेको छ । सखुवा बजारको राष्ट्रिय सेकेण्डरी स्कुलबाट परीक्षा दिने अमित नायक विशेष कारणले कुनैपनि परीक्षामा सामेल हुन सकेनन् ।
उनको मार्कसिटमा अरु सबै विषयमा अनुपस्थित नै देखाइएको छ । तर लेखा विषयमा सैद्धान्तिकमा अनुपस्थित देखाएको छ । तर प्राक्टिकलमा भने उनलाई अनुपस्थित भएपनि नम्बर चढाईएको छ । र नतिजा सी प्लस आएको छ । हेर्नुहोस् मार्कसिट ।
यो बर्षको नतिजाअनुसार उच्च तह ३.६१ देखि ४.०० जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या ३ हजार ६७ जना रहेको छ । परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र आंशिक तर्फ गरि कुल ४ लाख २८ हजार ६७ परीक्षार्थी सहभागी थिए ‘।
नियमित तर्फका २ लाख ९२ हजार १ सय ५३ परीक्षार्थी मध्ये ३ हजार ६७ जनाले मात्र उच्च तहको जीपीए प्राप्त गरेका हुन्। ३.२१ देखि ३.६० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या १६ हजार २ सय ४ जना रहेको छ’।
ग्रेडिङ पद्दतिअनुसार ९ वटा तहको ग्रेडअनुसार बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। ३१ हजार विद्यार्थीले २.८१ देखि ३.२० जीपीए प्राप्त गरेका छन्। २.४१ देखि २.८० जीपीए ल्याउनेको संख्या ५६ हजार ५ सय ३ जना रहेको छ। सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीले मध्यम स्तरको जीपीए प्राप्त गरेको बोर्डले जनाएको छ। २.०१ देखि २.४० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ८६ हजार २ सय २७ जना रहेका छन्’।
१.६१ देखि २.०० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ६२ हजार ६ सय १९ जना छन्। १.२१ देखि १.१६० प्राप्त गर्नेको संख्या १९ हजार रहेको छ भने ०.८१ देखि १.२० ल्याउने परीक्षार्थी ३ हजार ५ सय २४ जना छन्। सबैभन्दा कम स्तरको ०.० देखि ०.८० ल्याउने विद्यार्थी १३ हजार ३ सय ६२ जना रहेका छन्।’
ग्रेडवृद्धि तर्फ ७८ हजार ७ सय ४४ परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी थिए। आंशिकतर्फ ४१.८३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले जनाए। ५७ हजार १ सय ७० परीक्षार्थीले आशिंक तर्फ परीक्षा दिएकोमा २३ हजार ९ सय १५ जना मात्र उत्तिर्ण भएका हुन्। बोर्डले गतवर्ष देखि कक्षा १२ को नतिजा ग्रेडिङ पद्धतिअनुसार प्रकाशित गर्न थालेको हो’।